Mid ka mid ah xalkaas ka dhabta ah ee technology casriga ah ayaa dhalashada warbaahinta digital, sawirada iyo videos hadda si fudud u qaaday, ku kaydsan iyo wareejiyo dhexeeya qalabka, iyo waxa ay keentay in sawiro dheeraad ah iyo video clips qaaday ka badan sidii hore. Laakiin waxa ku saabsan muuqaalka jirka ah in aad leedahay ee carruurtaada, ama dhab filimka oo idinka mid ah waalidiinta aad qaaday? Tape ma xaqiro muddo ka dib, laakiin uma baahnid inaad si loo badiyo kuwa xusuus qaali ah, oo aad iyaga u bedeli karaan in files digital oo ay nolasha isku mid ah iyo kaydinta joogtada ah in files jira digital ku siin. Laakiin waxa ku lug leh helitaanka footage ku salaysan cajalad 8mm galay your computer?
1. Samaynta xiriir
Qaybta koowaad ee habkan si dhab ah loo helo hab lagu xidhi aad taariikhqorihii 8mm in computer si ay u liqi karo muuqaalka video ah. Tani loo isticmaalaa in ay noqon arrin habka a convoluted oo ay adag tahay, laakiin maanta waxa la dhigay ka fudud iyada oo qalabka ku takhasusay video qabsaday, waxay noqon kartaa kaararka gudaha in berooshka ah gudaha computer ah - caadi ahaan sida shaqeynta ka mid raaqaha TV ama sida is-jira USB qalabka furaysto galay dalool kasta oo USB aad kombuutarka. Xiriir saxda kala duwan yihiin iyada oo ku xidhan fiidiyo laftiisa iyo qalab video qabashada aad isticmaalayso, kuwa ugu badan waa la isticmaalayo xirayaasha RCA, kuwani waa 3 fiilooyinka, ee jaalaha ah, hal casaan ah iyo mid cad, waxay u dhigma midabo kala fur ku qoran kaadhka iyo fiidiyo ah. Signal video wuxuu isticmaalaa ugu xirayaasha jaalaha ah, halka xisaabta ah casaan iyo caddaan u channel kasta oo maqal ah rikoor ah. Mararka qaarkood audio ee labada kaarka qabashada ama fiidiyo ah u isticmaali doonaa oo kaliya caadiga ah 3.5mm Jack-fur u audio, u ah adabtarada oo sida caadiga ah waxaa ka mid ah qalabka qabashada.
2. Ciidamada Software
Qaybta xigta ee in qaab digital wareejinta cajalado aad your computer waa software ah. Tahay qalab aad qabsaday waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah barnaamij ku haboon si ay u helaan shaqo u samayseen, si kastaba ha ahaatee waxaa jira xoolo ah software free iyo ganacsi oo la heli karo marka lagu daro in ay bixiyaan saarayaasha qalab qabashada haddii aad jeceshahay wax ka badan farsamo ama ka badan mid sahlan, software dabcan kala duwan doono oo dhan shaqeeyaan wax yar ka duwan, laakiin habka aasaasiga ah ee isku sii joogi doonaa.
Dunida ugu saxsan, waxaad u baahan doontaa si ay u qoraan video ee tayada aad u sareeya, si kastaba ha ahaatee, ma jiro kharash ah in tayada aad ugu badan, marka la eego keydinta, files soo xerooto, waxay noqon doontaa oo ku saabsan 13GB halkii saac oo footage, iyo processing awoodda loo baahan yahay si ay u si ku filan ugu dhammayn. Hadda, dad badan ayaa lagu keydiyo oo ku filan iyo Processor si degdeg ah maalmahan inay ka welwelin, laakiin haddii ay tahay dhibaato aad u, ka dibna la qabsado goobaha ay ku saabsan tahay dheelli doonayaan, tayada dhanka ah Habka tirada file iyo awood computer. Tanaasulka A wanaagsan waa in la isticmaalo MPEG-2 riixo oo kuu ogolaanayaa inaad la abuuro files yar laakiin xajisto ugu tayada, daawadayaasha celcelis ahaan ma awoodi doonaan in ay u sheeg farqiga.
3. diiwaangelinta Video ah
Ka dib markii aad qotomisay walba kor, ka dhigay xidhiidhada iyo wixii la mid ah, waxa ay si fudud u ah waana arrin la bilaabo duubo software qabashada iyo dejinta fiidiyo ama il cajalad video kale u ciyaaro.
Haddii aad rabto in aad si ay u qoraan jajabkii gaarka ah ee video kaliya, waxaad u samayn kartaa adigoo si fudud u qaadan cajaladda barta in ka hor inta aanad bilaabin wax lagu qoro, ma aha in aad wax kasta si ay u qoraan haddii aadan u baahan tahay.
Marka lagu sameeyo, aad haddeer haysatidna doonaa MPEG-2 file ah digital ah ee video footage. Hadda aad dib u istaagi kara oo jecel aad hanad, ama aad ka guurto kartaa in wax yar la sameeyo file hadda aad leedahay.
4. Archiving iyo diinta
Sida aan ku soo sheegnay bilowga, mid ka mid ah sababaha diinta cajalad in files digital waa awooda in ay archive ee ah qaab aan bahdil ah ee badbaadada, iyo content video, sida caadiga ah waa DVD. Haddii loo maleeyo in hadda aad haysato mid ah kuwii MPEG-2 files ku jiraan xasuus qiimo ah safar nolosha, aad tallaabada xigta waxaa laga yaabaa in socday in ku lug iyaga qaadan gal DVD lagu xafido.
Waxaad si fudud u isticmaali kartaa DVD ee sida dhexdhexaadka ah lagu kaydiyo xogta ah waxa kaliya oo jiidi faylasha aad u gal DVD ah in la qoro (nidaamyada hawlgalka casri ah taasi si toos ah u samayn oo aan wax software dheeraad ah), ama aad u bedeli karaan faylasha in qaab DVD si ay si toos ah u ciyaaro ka disk in ciyaaryahan kasta DVD sida Wondershare Player .
Haddii aad doorato in la abuuro DVDs in shaqayn doonaa in ciyaaryahan kasta DVD, waxaad u baahan tahay qaar ka mid ah software DVD Abuur, sida iska cad mar kale ay jiraan tiro badan oo la kala dooranayo oo dhan wax yar ka duwan u shaqeeyaan laakiin aalada aasaasiga isku mid. Dajiyaan aad cusub MPEG-2 file galay software abuurka, wax hagaajin laga yaabaa in aad rabto in aad, taas oo ku xidhan software ah qaar ka mid ah ay yar yihiin ma goobaha tafatirka, kuwa kale waxay leedahay waxyaalo tafatirka dhamaystiran, ka dibna gubi (record) video finalka si DVD.
Waxaa runtii waa mid iska cad si loo hubiyo in cajalado aad 8mm loo arki karaa si nabad ah oo si fudud mustaqbalka by iyaga jeestay files digital in fududahay in si nabad ah ku kaydi iyo qoyska iyo asxaabta adduunka oo u qaybi waa galay.
> Resource > Video > Sidee si ay u gudbiyaan 8mm Videos in Computer (PC)